Fa ny FSX & P3D tsindrio eto
Ity maodely ity dia famerenana tanteraka ny MB-339A PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) tany am-boalohany navoaka taona vitsivitsy lasa izay miaraka amin'ny maodely hita maso tsara kokoa, sy ny cockpit virtoaly. Ity kinova vaovao amin'ny maodely ity dia misy firakofana ho an'ny ohatra mahazatra an'ny "Frecce Tricolori", ny ekipa italiana miaramila akrobatika. Vakio azafady ny torolalana.
Ny Aermacchi MB-339 dia roa-seater Italiana fiofanana ara-miaramila, natao tao amin'ny 1970s mba hisolo ny MB-326. Tsara tarehy sady racy, dia efa nanana fahombiazana mifangaro manohitra ny fifaninanana ny fiaramanidina maoderina kokoa toy ny Bae Hawk. Tokony ho 200 dika mitovy no naorina, ary sivy samy hafa ampiasain'ny firenena.
Downloads 5 450
Nohavaozina taminy 07-08-2012
Massimo Taccoli, Paolo Zamparo, Aaron R. fisolokiana